मेरो कार्यकालसँग आफ्नो कार्यकालको तुलना नगर्न एन्फा अध्यक्षलाई गणेश थापाको चेतावनी - Ujyaalo Nepal
मेरो कार्यकालसँग आफ्नो कार्यकालको तुलना नगर्न एन्फा अध्यक्षलाई गणेश थापाको चेतावनी
By ujyaalo	 On ५ मंसिर २०७७, शुक्रबार १६:३९ 20
त्यसकारण एन्फा अध्यक्षज्यूलाई मेरो कार्यकाल र आफ्नो कार्यकालको बिभिन्न जिल्लामा गएर तुलना नगर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। राम्रो काम गर्नुस सदैव मेरो हार्दिक शुभकामना छ। यदि तपाईलाई तुलना गर्न मन छ भने मैले यहा उल्लेख गरेका एन्फा ले आफ्नै स्रोतबाट संक्षिप्त रूपमा हाम्रो पहिलो चार वर्षको कार्यकालमा भएका कामहरु केहि बन्द भएका छन् भने साहिद स्मारक लिगको स्तर घटेको छ। त्यसकारण हिजो भएका कार्यक्रम निरन्तरता दिन प्रयास गर्नुस् र सक्नुहुन्छ भने हिजो भएका भन्दा राम्रो गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
3. हिजो फिफाको रकमबाट लिग सञ्चालन गर्न 25 लाख प्राप्त गर्दथ्यो भने आज आएर करिब 10 करोड प्राप्त भएको छ। हिजो का दिनको लिग र हाल सञ्चालन भएको लिगको बारेमा मैले कुनै चर्चा गरिरहनु नपर्ला। आम फुटबल प्रेमीहरुलाई लाई जानकारीनै छ।
4. हिजो खेलाडीहरुले प्राप्त गरेका कार र अपार्टमेन्ट जस्ता पुरस्कारहरु दिन नसकेर बन्द गर्नु भएको छ। किनभने यो फिफाको पैसाले दिन मिल्दैन। आफ्नै साधन स्रोतबाट दिन सक्नुहुन्न।
5. खेलाडीहरू र रेफ्री हरुलाई पारिश्रमिक दिनको निमित्त अक्षयकोष खडा गरी 8 करोड रुपियाँ राखिएको थियो। यसमा थप्ने काम गर्नुहोला। फिफाले दिएको रकम थप्न मिल्दैन। एन्फाको आफ्नै स्रोतबाट थप्ने हैसियत म देख्दिन। यदि थप्नु सक्नुभयो भने म निकै खुसी हुँदै तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
6. एन्फा सग आबद्ध सबैको लागि उपचारको निमित्त राखिएको 50 लाख रुपिया अक्षय कोषमा थप्ने काम गर्नुहोला। यसमा पनि फिफाको रकम थप्न मिल्दैन।
7. हिजो सुरु भएका राष्ट्रिय लिग लगायत विभिन्न नकआउट प्रतियोगिताहरू संचालन गर्नु होला।
8. खेलाडीहरु र रेफ्री हरूको को तलब विगत पाच वर्षदेखि बढेको छैन। त्यसमा वृद्धि गर्नुहोला। जुन दिनमा फिफाले खेलाडीहरुलाई तलब वढाउन स्वीकृति दिन्छ त्यसपछि मात्र तपाईंले बढाउनु सक्नुहुन्छ। आफ्नै साधनस्रोत खोजेर तलब बढाउन गारो होला। हिजोको दिनमा एन्फाले आफ्नै स्रोतबाट खेलाडीहरु र रेफ्री हरुलाई आफ्नै स्रोतबाट तलब दिँदै आएका थियौं।
9. U19 ले करिब तीन वर्षदेखि साफ च्याम्पियनसिपमा प्रथम स्थान हासिल गर्दा घोषणा भएको पुरस्कार हालसम्म पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। फिफा तथा एफसी को रकम चलाउन मिलेन अर्को स्रोत खोज्न सक्नु भएन।
10 . विगतमा खेलाडीहरुले 12 महिना क्लब र खेलाडीहरूको बिचमा अनुबन्धन भैइ 12 महिना तलव पाउने गर्दथे हाल आएर चार महिना मात्र तलब पाउँदछन्। यसरी खेलाडीहरुलाई अन्याय गर्ने काम गर्नुभएको छ।
11. बिगतमा साफ च्याम्पियनसिप र साउथ एसियन गेम्समा मा विजय प्रथम स्थान हासिल गरेमा सबै खेलाडी प्रशिक्षक लाइ अपार्टमेन्ट दिने घोषणा गरिएको थियो। आजको दिनमा पनि घोषणा गर्ने साहस गर्नुहोस्।
12. यी सबै कुरा गर्न लागि फिफाको र एएफसीको रकमबाट गर्न नमिलेको कारणले तपाईले गर्न सकिरहनु भएको छैन।
13 . एन्फा कम्प्लेक्स आफ्नै साधन स्रोतबाट बनाएको हो। एन्फाको आफ्नो स्रोतबाट अर्को एन्फा कम्प्लेक्स बनाएर देखाउनुस्।
14. एफसी तथा फिफामा नेपालले प्राप्त गरेका पद हरु प्राप्त गरेर देखाउनुहोस्।
15. एन्फा एकेडेमीबाट र अन्य प्रतियोगिताहरु बाट हिजोको दिनमा जस्तै राम्रा खेलाडीहरु उत्पादन गरेर देखाउनुस्।
16 . पाच वर्षअगाडि लिगको प्रथम पुरस्कार एक करोड थियो भने दोस्रो पुरस्कार 65 लाख तेस्रो पुरस्कार 35 लाख सोहीअनुसार चौथा, पाचौ, छैठौं, सातौं, र आठौं लाइ पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको थियो तर हाल आएर प्रथम स्थान हासिल गर्नेले जम्मा 37 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्दछन्। योभन्दा दुर्भाग्य क होला त्यसकारण लिग को प्रथम पुरस्कार कमसेकम2करोड पुर्याउनुहोला।सहिद स्मारक लिगको‌ पुरस्कार 1 लाख बाट एक करोड पुराएको हो।
माथी उल्लेखित गरेका कार्यक्रम हरु तपाईंले निरन्तरता दिन नसक्नुको मुख्य कारण चाहि कतिपय कार्यक्रमहरु गर्न फिफा र एफसी को रकम चलाउन मिल्दैन आफ्नो साधन स्रोत खोज्न तपाईंले सकिरहनुभएको छैन। हिजोको दिनमा भएका राम्रो काम हरुको निरन्तरता दिन सक्नु होस मेरो यही शुभकामना छ। जुन दिनमा तपाईले पुन रोकिएका कार्यक्रमहरु गर्न सक्नुहुन्छ त्यो दिनमा तपाईंलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिने छु। होइन भने फिफा र एफसीबाट आएको रकम र एफसी र फिफाले दिएको कार्यक्रम मात्र गरेर ऐतिहासिक काम गरे भनेर सस्तो प्रचारबाजी नगर्दा राम्रो होला।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७७, शुक्रबार १६:३९
अतिथिदेवो भव । अतिथिको उत्कृष्ट सत्कार गर्नु, उपनिषद्ले भन्छ
ईतिहास सम्झदै वर्तमान सपार्ने हो की त !